Articles | Singapore Personalized Patient Care
စင်ကာပူဗီဇာ – Singapore Visa
Apr 5, 2011 ssaye
စင်ကာပူ နိုင်ငံကို ၀င်ခွင့်ရဖို့အတွက် ဗီဇာလိုပါတယ်။ ဆေးကုသမှုဗီဇာ (သို့) အလည်အပတ်ဗီဇာကို လျှောက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ခါလျှောက်ရင် တစ်လ ဗီဇာပေးလေ့ရှိပြီး သက်တမ်းထပ်တိုးရင် နောက်ထပ်နှစ်လ ထပ်ရနိုင်ပါတယ်။
အွန်လိုင်း (အီးဗီဇာ) (သို့) ရန်ကုန်က စင်ကာပူသံရုံးမှာ တိုက်ရိုက်လျှောက်နိုင်ပါတယ်။ ဆေးလာကုမယ့်သူရော အတူလိုက်လာမယ့်သူအတွက်ပါ လျှောက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ Read more…
Posted in Articles	| Tagged Visa	| Comments Off
ကျန်းမာရေး စစ်ဆေးခြင်း ဧ။် အရေးပါပုံ
Mar 30, 2011 ssaye
ကျန်းမာရေး ပုံမှန် စစ်ဆေးခြင်းအားဖြင့် တိတ်တဆိတ် လူသတ်သမားများ ဖြစ်သည့် နှလုံး၊ ဆီးချို၊ သွေးတိုး နှင့် ကင်ဆာ စသည့် ရောဂါများကို ကြိုတင်တားဆီး ခုခံ ကာကွယ်နိုင်သည်။
ကနဦးလက္ခဏာ ပြသခြင်း မရှိသော ရောဂါများကို ရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်းဖြင့် အခြေအနေ ပိုမိုဆိုးရွားသွားခြင်း နှင့် ကျန်းမာရေး ကုသစောင့်ရှောက်မှု စရိတ်မြင့်တက်သွားခြင်းကို ကာကွယ်နိုင်ပါသဖြင့် ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးခြင်းသည် အလွန်အရေးပါသည် ဟုဆိုနိုင်ပါသည်။ Read more…
Posted in Articles	| Tagged Medical Checkup, ကျန်းမာရေး စစ်ဆေးခြင်း	| Leaveacomment
Oct 27, 2010 ssaye
Chemotherapy involves the use of drugs that are toxic to cancer cells. This treatment method remainsamainstay of anti-cancer therapy. Depending on the type of cancer under treatment and choice of chemotherapy drugs, therapy may either be by injection or by mouth.
ကင်ဆာဆေးသွင်းကုသခြင်းသည် ကင်ဆာဆဲလ်များကို သေစေသော ဆေးများ သုံးခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဆေးသွင်းကုထုံးသည် ကင်ဆာရောဂါကုသခြင်းတွင် အဓိက ကုသနည်းတစ်ခု ဖြစ်နေဆဲပင် ဖြစ်ပါသည်။ ကင်ဆာ အမျိုးအစားပေါ် မူတည်ပြီး သုံးရမည့်ဆေးများနှင့် သုံးပုံသုံးနည်း (ဆေးထိုးခြင်း/ ဆေးသောက်ခြင်း) ကွာခြားပါသည်။ Read more…
Posted in Articles	| Tagged Chemotherapy, ကင်ဆာ, ဆေးသွင်းကုသခြင်း	| Leaveacomment